Marshall Electronics dia mandeha amin'ny alàlan'ny famoahana vahaolana vahaolana amin'ny onjam-peo an-tserasera ho an'ny klioba Texas Card House Poker | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. News Engineering Engineering
Home » Featured » Marshall Electronics dia mandeha amin'ny alàlan'ny famoahana vahaolana vahaolana amin'ny onjam-peo an-tserasera ho an'ny klioba Texas Card House Poker
Marshall Electronics dia mandeha amin'ny alàlan'ny famoahana vahaolana vahaolana amin'ny onjam-peo an-tserasera ho an'ny klioba Texas Card House Poker
Ny famolavolana Omega Broadcast ao amin'ny Miniall Miniature HD sy Compact HD Zoera fakantsary Hakao lalao
AUSTIN, TX, AUGUST 24, 2020 ̶ Rehefa nikasa ny hamorona vahaolana kalitao mivantana sy mivantana mivantana natao hametrahana ny mpijery an-tserasera amin'ny fomba akaiky sy manokana ny fiheverana ny hetsika amin'ny fifaninanana malaza rehetra ny Texas Card House, ilay klioba poker voalohany ara-dalàna any Texas, nivadika ho Omega Broadcasting veteraner an'ny orinasa 30 taona, mpamatsy fandaharana fitaovana video. Mikasa ny hijanona ao anaty teti-bola na dia tsy manaiky lembenana amin'ny kalitao aza, ny Omega Broadcast dia nahita ny valiny notadiaviny Marshall CV503 Miniature HD ary fakan-tsary miompy fikaona CV350.
"Nampiasa Marshall izahay taloha ary fantatray fa izy ireo no safidy tsara amin'ny zavatra tadiavin'ny Texas Card House," hoy i David Fry, filoha lefitra, Omega Broadcast. "Ny vokatra Marshall ary koa ny ekipa varotra sy mpanohana dia kilasy eran'izao tontolo izao, ary faly izahay hiara-miasa amin'izy ireo indray."
Ho an'ny tetikasa, ny ekipa Omega dia namolavola sy nametraka rindran-tsambo iray izay manantona ambonin'ny latabatra enina tongotra amin'ny sivana sivy tongotra, izay nomena manokana amin'ny fifaninanana mombamomba ny haavo avo lenta. Ny fitaovana elektronika rehetra dia napetraka tsara ao anaty fefy, izay misy fakantsary fito, mikrôby roa ary jiro efatra. Ny fitaovana dia natambatra tao amin'ny birao iray nijerena manokana tamin'ny alàlan'ny fakantsary Marshall fanampiny niaraka tamin'ny mpanodina RCP. Ho an'ny fifaninanana misy haino aman-jery avo lenta dia voarakitra miaraka amin'ny mpanao fanambarana iray ao amin'ny efitrano aoriana ny lalao. Ny renirano rehetra dia misy fahatantorana 30 minitra mba hiarovana ny fahamarinan'ny lalao.
Ho an'ny Texas Card House, ny fakantsary CV350-10XB Marshall dia ampiasaina ho an'ny fijerin'ireo mpilalao ary koa ho an'ny fiatrehana akaiky ny karatra ary hanasongadinana ny logo Texas Card House. Miaraka amin'ny vavahadin-tsary misy azy, ny fakantsary CV350-10XB dia mahatsapa mpilalao iray miresaka ary mamadika ny làlany mankany amin'ilay mpilalao manokana, manome ny mpijery amin'ny traikefa feno ny mijery sy maheno ny hetsika. Manohana 2.5-megapixel 1/3-inch HD sensor avo lenta, ny CV350-10XB dia afaka misambotra ny hetsiky ny mpilalao rehetra. Ny CV350-10XB dia manohana fifandraisana RS-485 amin'ny alàlan'ny boaty famatsiana herinaratra 12V.
Ankoatr'izay, ny fakantsary CV503 Marshall dia ampiasaina eo ambonin'ny latabatra ary ho an'ny tifitra marobe amin'ny efitrano fifaninanana. Miaraka amin'ny kapila 2.5 megapixel, 1 / 2.86 santimetatra, ny CV503 dia mitondra mazava sy fenoHD video. Ny fakantsary CV503 dia manana tendrombohitra M12 azo ovaina. Ity fakantsary ity dia azo zahana tsara amin'ny alàlan'ny RS-485 na fivarotam-bokatra amin'ny menu.
Nanomboka tamin'ny tranona mpijery zato fotsiny ny tranokala tao Texas Card ary noho ny kalitao sy ny fahazavan'ny fakantsary Marshall, manana 10,000 mpijery izy ireo amin'ny Internet, ”hoy ny tenin'i Fry. Faly eraky ny orinasa ny vokatra, mikasa ny hampihatra izany teknolojia vaovao izany izy ireo mandritra ny ivony hafa. ”
Niorina tao Austin tamin'ny taona 2015, ny iraky ny Texas Card House dia ny hitondra fiarovana sy kilasy kilasy voalohany ho an'ny mpilalao manerana ny fanjakana lehibe ao Texas. Ny fikambanana dia manolotra toerana maro manerana an'i Texas mba hahafahan'ny mpikambana ao aminy mankafy endrika poker isan-karazany amin'ny klioba sosialy avo lenta miaraka amin'ireo mpivarotra matihanina sy ny fandaharan'asa tsara indrindra amin'ny firenena.
Horonan-tsarimihetsika CV503 fakantsary Miniature Marshall Electronics 2020-08-24
Previous: Sequin AR dia manendry an'i Brad Rumler ho filoha lefitry ny varotra amin'ny fanitarana sy fitomboana amin'ny spearhead: Ny orinasam-pandraharahana momba ny zava-misy marobe izay manampy ny mpitarika efa za-draharaha izay nitazona lahatsoratra tamin'ny Brainstorm, AT&T sy Apple, Inc.
Next: Ny Lahatsary Matthews dia manohana ireo mpamoaka filma Espaniola